तपाइको घरमा घ्युकुमारीको बिरुवा छ भने आफुलाई धेरै भाग्यमानी ठान्नुहोस,यस्तो छ कारण |
August 9, 2021 August 9, 2021 adminLeaveaComment on तपाइको घरमा घ्युकुमारीको बिरुवा छ भने आफुलाई धेरै भाग्यमानी ठान्नुहोस,यस्तो छ कारण
घ्युकुमारीको दैनक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ! घ्युकुमारीको फाईदा र बेफाईदा शरीरलाई घ्युकुमारीको दैनक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ! यस्तो बनाउँछ घ्युकुमारीले शरीरलाइ । पा-यल्स रोगका बिरामीहरु आजभाेलि दैनिक बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् । क-ब्जियत नै पा-यल्सको मु-ल कारण हो किनकि जब क-ब्जियत हुन्छ तब दि-सा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका र-क्तशि-रालाई तन्का-इ दिन्छ ।यो क्रमस फैलन थाल्छ र गि-र्खा बन्न थाल्छ जसका कारण म-लद्वार दु-ख्ने वा पो-ल्ने गर्दछ । पा-यल्स भएका विरामीहरुका लागि घ्यूकुमारी अचुक औषधी मानिन्छ । पा-यल्स भएमा विस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्छ । बदामको तेल अर्थात् बदाम रोगन पनि लगाउन सकिन्छ । एक दिनमा ३ देखि ४ पटक म-लद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए पनि आराम मिल्ने गर्दछ ।
मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पा-यल्सका रोगीलाई फाइदा हुन्छ । आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ । दि-सा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास लक्षण हो ।म-लाशयमा भारीपन हुने, दि-सा राम्रोसँग नहुने, दु-ख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् । जति जति रोग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दु-खाई बढी हुन्छ । गु-द्वारमा मा-सुको ड-ल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ ।क-ब्जियत हुन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ किनभने अपच हुने खाने कुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्याकेटमा राखिएका, तारेका, भु-टेका, जंक फूड, मसलेदार, मा-सुजन्य खानेकुरा कब्जियतको मुख्य कारण बन्छ । अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राती अबेर खाने,
आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने बानीले कब्जियत रोग पैदा गर्छ । त्यस्तै दि- सा रोक्ने बानी पनि अर्को कारण हुनसक्छ । पा-यल्स भएको अवस्थामा बो-सोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मा-सुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड ड्रीकं आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । म-दिरापान, धु-मपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ ।काँचो केरा उसिनेर बिहान,बेलुका खाँदा पनि पा-यल्स रोगीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । क-ब्जियत हुन नदिन रेसा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ। अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पायल्सका विरामीहरुका लागि निकै आराम मिल्ने गर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएकाे रिपोर्ट
को’रोना भाइरसले फोक्सोमा असर पारेको छ कि छैन? घरमै कसरी पत्ता लगाउने? थाहा पाइराखौ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
यो झारले किड्नीमा आउने समस्या मात्र होईन किड्नी फ़ेल हुनबाट पनि बचाउँछ,यो झार कहा पाउँछ र कसरी सेवन गर्ने,पुरा जान्कारी लिनुहोस